Inkqubo yokuPhathwa komoya, isiGanga sokuCocwa koThuli, uMnyango oCocekileyo weGumbi- iTekMax
I-Dalian TekMax, eyasekwa ngo-2005 ngemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-RMB20 yezigidi, ishishini eliphambili kwezobuchwephesha eligxile kugqirha, uyilo, ulwakhiwo, uvavanyo, ukusebenza kunye nokugcinwa kwenkqubo yemo engqongileyo elawulwayo. Ukusukela oko isiseko, inkampani ibigxile kwicandelo lobugcisa bokucoca kunye nolawulo lwesicelo, kuqokelelwe iitalente zolawulo lobunjineli bokucoca ngaphezulu kwabantu abangaphezulu kwama-80…
Ngaphezulu kwama-400 abantu
UMOS owenziwe ngezandla ucocekile ...
Iphaneli yokugquma engacimi mlilo ye-Magnesium oxysulfide (eyaziwa ngokuba yipaneli yemagniziyam oxysulfide) yindawo ekhethekileyo yeepaneli zokucoca ngentsimbi. Yenziwe ngemagniziyam sulphate, nemagniziyam oxide kunye nezinye izinto, ngaplastikhi kwaye wabumba waphilisa. Luhlobo olutsha oluhlaza, oluhambelana nokusingqongileyo kunye nemveliso yokulondolozwa kobushushu. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo izinto umbala ipleyiti yesinyithi, ukuba iingenelo engangenwa, manzi, ubushushu thermal, fl ...
Zenziwe mg cl cl ...
1. Uluhlu olubanzi lwezicelo: Iimveliso zisetyenziselwa ukufakwa kwegumbi elicocekileyo, indawo evaliweyo kunye nemveliso ecocekileyo, izityalo zeshishini, indawo yokugcina izinto, ukubanda okubandayo, iipaneli zokupholisa umoya. 2. Ukwahlulwa kwemveliso: Iimveliso zibandakanya umphezulu wentsimbi werock engundoqo ye-panle, i-aluminium yentsimbi (iphepha) ye-honeycomb core panle, umphezulu wentsimbi we-gypsum core panle, umphezulu wentsimbi we-gypsum rock u-panle panle, umphezulu wensimbi we-gypsum layer extrusion uqinise ukotya lwe-panle. Sinokuvelisa kwakhona iqabane elikhethekileyo ...
Ezenziwe ngesandla rock uboya cle ...
Iphaneli yokuhlanjululwa koboya bamatye yahlulwe yaziindidi ezimbini: iphaneli yoboya eyenziwe ngomatshini kunye nepaneli yoboya eyenziwe ngesandla. Phakathi kwabo, iphaneli yoboya obenziwe ngezandla yahlulahlulwe yenziwa ngeplanethi eyenziwe ngoboya obunyulu, ipaneli yoboya obenziwe ngesandla be-MgO kunye neplani eyenziwe ngoboya ephindwe kabini ye-MgO. Iphaneli yokuhlanjululwa koboya be-Rock kunye nenkqubo yayo yemveliso zizinto eziphambili ngakumbi ukuza kuthi ga ngoku. Iphaneli yoboya eyenziwe ngomatshini eyenziwe ngohlobo olusebenzisa uboya bengxondorha njengemathiriyeli engundoqo kwaye ixutywe yimidlalo emininzi ...
Isikhokelo semacala amabini eMg ...
Iphaneli yegumbi ecocekileyo yegumbi inokuchasana kakuhle nomlilo kwaye yipaneli engatshiyo. Ixesha eliqhubekayo lokutshisa ilangatye ngu-zero, 800 ° C alitshisi, i-1200 ° C ngaphandle kwamadangatye, kwaye lifikelela kwelona nqanaba liphezulu linobungqina bomlilo elingenakutsha A1. Inkqubo yokwahlulahlula eyenziwe nge-keel ekumgangatho ophezulu inomda wokumelana nomlilo weeyure ezi-3. Ngaphezulu, isixa esikhulu samandla obushushu sinokufunxwa kwinkqubo yokutsha komlilo, kulibazise ukwanda kweqondo lobushushu. Kwimozulu eyomileyo, ebandayo kwaye efumileyo, iperforma ...
Kumagumbi acocekileyo e-microelectronics kunye ne-pharmac ...
Izinto ezichaphazela ifuthe le-ultraviol ...
Ngenxa yokuphuhliswa kwetekhnoloji yecompyuter, ...
I-purifi-proof purifi ...
Ukusebenza kobungqina bokuqhushumba ...
Ifestile yegumbi elicocekileyo, Ukucoca iCandelo loMoya oMtsha, Igumbi elicocekileyo, Inkqubo yaManzi aBandayo, Ifestile yokuGqibela yokuCoca igumbi, Igumbi lokucoca umoya ococekileyo,